पीवीसी बल वाल्व
Ture संघ बल वाल्व
सिंचाई बल वाल्व
पीवीसी कम्प्याक्ट बल वाल्व
पीवीसी पुतली वाल्व
पीवीसी चेक वाल्व
फिल्टर- Y प्रकार
स्वचालित फिल्टर स्टेशन
ड्रिपर र स्प्रिंकलर
ठूलो बन्दुक स्प्रिंकलर
मिनी वाल्व र फिटिंग
उर्वरक इन्जेक्टर Venturi
पीवीसी LayFlat नली र फिटिंग
उपकरण र अन्य
GreenPlains, २०० in मा स्थापित सबैभन्दा विशेष सिंचाई उत्पादन निर्माताहरु मध्ये एक को रूप मा, विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरु को लागी सिंचाई उत्पादनहरु समाधान प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। हामी शीर्ष उत्पादन गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा एक राम्रो प्रतिष्ठा संग उद्योग को नेतृत्व गर्दै छन्।
लगातार विकास र नवीनता को १० बर्ष भन्दा बढी पछि, GreenPlains चिनियाँ अग्रणी र विश्व प्रसिद्ध सिंचाई उत्पादन निर्माता भएको छ। सिंचाई उत्पादनहरु को निर्माण को क्षेत्र मा, GreenPlains आफ्नो अग्रणी टेक्नोलोजी र ब्रान्ड को लाभ स्थापित गरेको छ। पीवीसी भल्भ, फिल्टर, Drippers, र मिनी भल्भ र फिटिंग को मामला मा, GreenPlains अग्रणी ब्रान्ड को एक चिनियाँ बनेको छ।
GreenPlains आर एंड डी, उत्पादन, र सिंचाई उत्पादनहरु को मार्केटि specialized मा विशिष्ट छ। उत्पादन कार्यशाला 400 भन्दा बढी molds छ। उत्पादनहरु पीवीसी बल वाल्व, पीवीसी तितली वाल्व, पीवीसी चेक वाल्व, फुट वाल्व, हाइड्रोलिक नियन्त्रण वाल्व, एयर वाल्व, फिल्टर, ड्रिपर, स्प्रिंकलर, ड्रिप टेप, र मिनी वाल्व, फिटिंग, क्लैम्प काठी, उर्वरक इन्जेक्टर भेन्टुरी, पीवीसी LayFlat नली र फिटिंग, उपकरण र धेरै अन्य उत्पादनहरु। उत्पादनहरु र टेक्नोलोजीहरु को एक संख्या राष्ट्रिय पेटेंट प्राप्त गरेको छ।
हामी कसरी जित्छौं
व्यावसायिक आर एन्ड डी टीम, हामी उत्पादन डिजाइन, मोल्ड डिजाइन र उत्पादन निर्माण को निर्माण बाट एक स्टप सेवा प्रदान;
हामीले SGS बाट ISO9001 गुणस्तर प्रणाली प्रमाणीकरण प्राप्त गरेका छौं। हामी उन्नत व्यवस्थापन प्रणाली र परिष्कृत व्यवस्थापन टोली संग योग्य छन्। हामी निगरानी र ईआरपी, एमईएस, आयामी गोदाम व्यवस्थापन प्रणाली र ISO9001 गुणस्तर प्रणाली को माध्यम बाट प्रत्येक आदेश को लागी सामान वितरण को लागी पीओ नियुक्ति बाट सम्पूर्ण प्रक्रिया ट्र्याक; हामी हरेक एकल उत्पादन को गुणवत्ता नियन्त्रण र लागत प्रभावी उत्पादनहरु र दुनिया भर मा हाम्रा ग्राहकहरु को लागी सेवा प्रदान गर्दछौं।
हामी को छन्?
GreenPlains, २०० in मा स्थापित सबैभन्दा विशेष सिंचाई उत्पादन निर्माताहरु मध्ये एक को रूप मा। हामी शीर्ष उत्पादन गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा एक राम्रो प्रतिष्ठा संग उद्योग को नेतृत्व गर्दै छन्।
कहाँतिर हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस्?
Bafang उद्योग क्षेत्र, Dacheng, Langfang शहर, हेबै प्रान्त, चीन
हाम्रो उत्पादनहरु वा pricelist को बारे मा सोधपुछ को लागी, कृपया हामीलाई तपाइँको ईमेल छोड्नुहोस् र हामी सम्पर्क मा हुनेछौं २४ घण्टा भित्र।
हामी कुकीहरु को उपयोग गर्न को लागी हाम्रो वेबसाइट को डिजाइन अनुकूलन गर्न को लागी। वेबसाइट मा तपाइँको यात्रा जारी राखेर, तपाइँ कुकीज को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ। [अधिक जानकारी]ठिक छ